TCDD Inotora Vanjiniya | RayHaber
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraTCDD Injiniya Kuunganidza
28 / 11 / 2019 06 Ankara, 35 Izmir, Central Anatolia Region, Mabasa, Railway, Turkish Aegean Coast, GENERAL, musoro wenyaya, TURKEY
tcdd statistist inoda mainjiniya uye puantor
Republic of Turkey State Railways (TCDD) KPSS inokanganisa nehuwandu, mainjiniya nemapurisa mazita kumatunhu akasiyana nematunhu ane hurongwa hwepakati pechinzvimbo chakasundira mabhatani ekuti vatore vashandi vehurumende.
State Railways 6 yakazivisa kutora vashandi vehurumende kune OSYM nekuvazivisa nezvekuda kwavo kwetsamba yepamutemo. Makodhi ehupamhi hwevashandi vehurumende kuti vashandiswe mumaguta e Ankara ne İzmir Konak akabudiswa.
OSYM Mukwikwidzi Shanduko
ÖSYM ichaita rese basa rinodiwa rine chekuita nemabasa ekugovanisa uye maitiro ekushandisa. Saiyo yepakati basa, hapana imwe institution inozokwanisa kupindira mune dzakagadzwa kunze kweOSYM. Kubvunzurudza uye nemuromo bvunzo dzinozoendeswa kune vashandi vehurumende vanogona kunyorera kune OSYM mukwikwidzi transaction peji.
Iyo TCDD ichasarudza kupa 1 vanyori, 2 mainjiniya uye 3 mapikicha zvichienderana nekugovera kwevashandi vanoburitswa.
Zvinoenderana neruzivo rwakaburitswa mu2019 / 2 central task guide, mashandiro anotanga ku3 Zvita 2019 uye anozopera pa12 Zvita. Online application ichaitwa mukati menguva ino.
STAFF TITLE dunhu PCS
zve--wezvokukurukurirana Izmir 3
TCDD 6 yevashandi vehurumende kugamuchira vashandi kwekuparadzira vashandi Click.
ZVINHU ZVINOGONESESA KUTI USHURE
Kutanga Zuva: 03.12.2019 10: 00
Kupera Zuva: 12.12.2019 23: 59
Mari Yekutanga: 20 TL
Nzvimbo Dzokubhadhara: Mapazi ese eAkbank, ATM uye internet banking (kunze kwevanyoreri kubva kuTRNC); Mapazi ese eAlbaraka Türk Kubatanidzwa Kwemabhangi, ATM uye internet banking (kunze kwevanyoreri kubva kuTRNC); Mapazi ese eFinansbank, ATM uye internet banking (kunze kwevanonyorera kubva kuTNN); Mapazi ese e Kuveyt Türk Katılım Bankası, ATM uye internet banking (kunze kwevanyoreri kubva kuTRNC); Mapazi ese eTürk Ekonomi Bankası uye internet banking; Halkbank ATM, internet banking uye matavi; Mapazi ese eEU Bank uye internet banking (kunze kwevanonyorera kubva kuTNN); Mapazi ese uye maATM eVakıf Kubatanidzwa Kwemabhangi (kunze kwevanyoreri kubva kuTRNC); Ziraat Bank inongoshandisa internet banking uye nharembozha banking (hapana mubhadharo unobhadharwa kubva kumapazi uye maATM); OSYM Kadhi Kubhadhara System (https://odeme.osym.gov.tr/)
TÜVASAŞ iri kutora maNjini e12 eNational National Project!
TUVASAS inozivisa kushambadzira kwevanongorori ve19 yeNational Train Project
19 Contract Engineer ye National Train Project
Kuvakwa muDhaha Metro
Injini yevashandi vanozotora muongorori weNational Train Project
Rail Systems Injiniya Vabati, Rail Systems…
TÜVASAŞ Uchagamuchira 43 Engineer ye 'National Train Project'
TCDD inotora vashandi vakaremara
TCDD iri kuunganidza vanhu vekare vaine mhosva!
TCDD yevashandi vekushandira vanhu
Kuwana vatengi veTCDD
TCDD vashandi vanozvitsvaga
Istanbul Municipality Vakokerwa kuChannel Istanbul Musangano